Ku guuleysto Wii ka Noobie! | Martech Zone
Saaxiibkeyga wanaagsan, Patric… aka Mr. Noobie, wuxuu siinayaa Nintendo Wii! Patric wuxuu saaxiib weyn ku ahaa balooggeyga sanadkii la soo dhaafey waxaanan la cabney koob badan oo kafee ah asxaabtayada Koobka Bean.
Sida aan ugu faraxsanahay qalabkii ugu dambeeyay ama tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay, waxaa muhiim ii ah inaan xasuusto in qeyb wanaagsan oo ka mid ah dadka soo booqda degelkeyga aysan wax fikrad ah ka hayn waxa aan ka hadlayo. Halkaas ayuu ka yimaadaa Mr. Noobie! Haddii aad dhibaato ka qabtid fahamka TiVo, shabakad internet, ama taleefankii ugu dambeeyay, fursadaha ayaa ah in Mudane Noobie wax ka qoray ama abuuray boggag ku saabsan. Waa nin weyn oo shaqo muhiim ah qabanaya!
Caawi Dhiirrigelinta Bixinta Patric
Markuu Patric ii sheegay inuu siinayo Wii, waxaan u sheegay inaan doonayo inaan wax ka qoro. Shaacinta buuxda, inkasta, waxaa sidoo kale jira dhiirigelin aniga ah! Mudane Noobie wuxuu kaloo siinayaa iPod Nano iyo iPod Shuffle!
Haddii saxiixyada badankood ay ka yimaadaan goobtaada waxaad ku guuleysan doontaa 8GB iPod Nano.
Haddii guuleystaha Nintendo Wii uu ka yimid bartaada, waxaad ku guuleysanaysaa 1GB iPod Shuffle.
Ku saabsan Noobie:
Noobie waa barta waxbarasho ee tikniyoolajiyadeed. Haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato qalabkii ugu dambeeyay ama aad barato siyaabo cusub oo tiknoolajiyaddu kuu shaqeyso, waan ku caawin karnaa. Noobie wuxuu bixiyaa macluumaad la isku halleyn karo oo ujeeddo leh oo ku saabsan jawi aamin ah oo fahamsan. Kaqeybgal dhacdo, akhri an article, caleenta ah blog, ama jadwal kalfadhi tababar ah.
Yey tahay inuu galo?
Dabcan qof kasta oo raba Wii waa inuu galo si uu u guuleysto. Intaa waxaa sii dheer, in kastoo, hubi inaad ereyga uga hesho Noobie dhammaan asxaabtaada iyo qoyskaaga oo xoogaa caqabad ku ah. Xitaa haddii ay yihiin dad ku jira xafiiskaaga, Patric wuu soo bixi karaa oo wax ku qaban karaa tababarka goobta. Waa nin weyn oo leh dad badan oo raacsan iyo xitaa qalbi weyn oo ka caawinaya kuwa hareerahayaga ah ee u muuqda inay cabsi qabaan, halkii ay ku faraxsan yihiin, tikniyoolajiyadda.
Gali hada fursad aad ugu guuleysato Wii Nintendo ah Noobie!
Tags: automatticdhagsiiMuhiimadda gujintaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkalacag bixisaybixi retweetsqaybsiga la bixiyayaragtiyada la bixiyayKhayraadkafariin aamin ahdukaankastevekremerHogaamiyaha Suuqavirurliskaa wax u qabso